Ao amin'ny Analog taona, fanangonana antontan-kevitra momba ny fitondran-tena-izay manao raha-dia lafo, ka noho izany, somary tsy fahita firy. Ankehitriny, ao amin'ny vanim-potoana nomerika, ny fihetsika ny an'arivony tapitrisa ny olona ao, voatahiry, ary analyzable. , Ohatra, ianao isaky ny tsindrio eo amin'ny tranonkala, manao antso amin'ny finday, na handoavana ny zavatra miaraka amin'ny carte de crédit, dia nomerika tsoratra ny fitondran-tena no namorona sy voatahiry araka ny raharaham-barotra. Satria Ireo antontan-kevitra ireo ny by-vokatry ny olona ny hetsika isan'andro, dia matetika antsoina hoe dizitaly soritra. Ankoatra ireo natao ny raharaham-barotra soritra, governemanta mampino koa manan-karena na ny olona momba ny angon-drakitra sy ny raharaham-barotra, tahirin-kevitra izay matetika digitized sy analyzable. Niara-ireo raharaham-barotra sy ny firaketana an-tsoratra ny governemanta dia matetika antsoina hoe lehibe angona.
Ny tsy mitsaha-fiakaran'ny tondra-drano ny tahirin-kevitra lehibe dia midika fa efa nifindra avy amin'ny izao tontolo izao izay fihetsika antontan-kevitra dia zara raha ny amin'ny fitondran-tena izao tontolo izao izay tahirin-kevitra no be dia be. Kanefa, satria ireo karazana tahirin-kevitra dia somary vaovao, dia mampalahelo be ny fikarohana mampiasa azy ireo an-jambany ny mpahay siansa toa nanenjika misy tahirin-kevitra. Ity toko ity, fa, manolotra ny fehezin'ny toro fomba fahatakarana ny tahirin-kevitra isan-karazany ny loharanom-baovao sy ny fomba azo ampiasaina. Izany karena dia tokony hanampy anao fahatakarana tsara kokoa ny fikarohana ampy fanontaniana mba mety loharanom-tahirin-kevitra. Na, raha toa efa misy loharanom-baovao dia tsy ampy, handresy lahatra anao mba hanangona ny tahirin-kevitra manokana amin'ny fampiasana ny hevitra ao amin'ny toko hoavy.
Ny dingana voalohany ny fianarana avy amin'ny tahirin-kevitra lehibe dia ny mahatsapa fa anisan'ny malalaka kokoa ny sokajy ny tahirin-kevitra izay efa nampiasaina ho an'ny fikarohana ara-tsosialy nandritra ny taona maro: observational angon-drakitra. Teny mafy, observational tahirin-kevitra dia misy tahirin-kevitra izay avy amin'ny fandinihana ny rafitra ara-tsosialy tsy nitsabaka amin'ny fomba. Ny fomba hiteny ratsy ny mieritreritra momba izany dia ny hoe observational tahirin-kevitra dia ny zavatra rehetra izay tsy tafiditra miresaka amin'ny olona (ohatra, fanadihadiana, ny lohahevitra ny Chapter 3) na manova ny tontolo ny olona (ohatra, fanandramana, ny lohahevitra amin'ny toko 4). Noho izany, ankoatra ny raharaham-barotra sy ny firaketana an-tsoratra ny governemanta, observational angona dia ahitana ihany koa ny zavatra toy ny lahatsoratry ny gazety lahatsoratra sy sary zanabolana.
Ity toko ity dia misy fizarana telo. Voalohany, ao amin'ny Fizarana faha 2.2, I mamaritra angon-drakitra lehibe amin'ny an-tsipiriany, ary hanazava ny fototra samy hafa izy sy ny tahirin-kevitra izay amin'ny ankapobeny no ampiasaina ho an'ny fiaraha-monina fikarohana tamin'ny lasa. Avy eo, ao amin'ny Fizarana faha 2.3, I mamaritra folo toetra mahazatra ny angon-drakitra lehibe loharanom-baovao. Ny fahatakarana ireo toetra mahatonga antsika hahafantatra haingana ny tanjany sy ny fahalemeny ny misy loharanom-baovao ary hanampy antsika hitrandrahana loharanom-baovao vaovao izay noforonina ho amin'ny ho avy. Farany, ao amin'ny Fizarana faha 2.4, I mamaritra telo lehibe tetika fikarohana izay azonao ampiasaina mba ianarana avy observational Data: manisa ny zavatra, forecasting zavatra, ary approximating ny fanandramana.